Ukuhlawula nge-Apple Pay yezothutho lukawonkewonke eSingapore kunokuba yinyani ngo-2018 Ndisuka mac
I-Apple Pay iyakunxibelelana ne-Singapore Land Transit Authority, ukwenza iimvavanyo zokulinga ukuhlawula amatikiti ebhasi kunye noololiwe kwilizwe laseAsia. Ngokucacileyo, iqabane lobuchwephesha liya kuba yi-MasterCard, eya kuthi ibonelele ngezixhobo eziyimfuneko ukuze zikwazi ukuhlawula ngeqonga lokuhlawula lika-Apple ukusukela ngo-2018, ukuba ngaba iimvavanyo ezenziweyo ziyonelisa. Kukuphuculwa kweprojekthi eyenziwa ngabasemagunyeni baseSingapore ukusukela ngoMatshi odlulileyo. Eyaziwa sisifinyezo se-ABT, bazimisele ukwenza lula ukuhlawula ngeendlela zothutho, kubandakanya abafundi ngeendlela ezingenakunxibelelana, ngakumbi amakhadi etyala kunye ne-EMV.
Uvavanyo lwenziwe nge- € 100.000 ebonelela ngeentengiselwano ezingama-60.000 ngosuku. Inkampani inephepha lobhaliso elivulekileyo labo bafuna ukuzama inkonzo yokuthenga itikiti. Umsebenzi ngamnye urekhodwa kwinkqubo, kunye nazo naziphi na izehlo ezinokubakho ngabasebenzisi. Emva kwesi sigaba sokuqala, lAbaphuhlisi beprojekthi bazimisele ukuvula inkqubo yentlawulo ngeendlela zombane, ezinje ngeewotshi okanye iifowuni.
I-CEO ye-LTA, i-Ngien Hoon Ping, inkampani eqhuba inkqubo:
I-LTA iyabandakanyeka ekwenzeni ukuba abahambi bonwabele uncedo oluziswa ziintlawulo zombane kwizithuthi zikawonkewonke. Sikunye namaqabane ethu, sisebenzisana nokwandiswa kokulinga kwe-ABT, ukwanda, kunye nokuthunyelwa ngokusisigxina, ukuba sibe ngumqolo wotshintsho lwethu kwintlawulo ye-elektroniki yabahambi.
Kodwa iSingapore ayisiyedwa ekubhaliseleni ukuhlawulwa kwezithuthi zikawonkewonke kwiintlawulo ezivela kwizixhobo ze-elektroniki. Ezinye izixeko ezinjengeNew York zivavanya inkonzo yenethiwekhi yezothutho ye-MTA. Ukuqala kwayo kulindeleke phakathi ku-2018.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukuhlawulela izithuthi zikawonkewonke eSingapore ngeApple Pay kunokuba yinyani kwi2018